दक्षिण अफ्रीकालाई उरुग्वेको झड्का/स्पेनको गाँसमा ढुङ्गा/चिलीको जित | Home
दक्षिण अफ्रीकालाई उरुग्वेको झड्का/स्पेनको गाँसमा ढुङ्गा/चिलीको जित
Posted on June 17, 2010 by Yonepal	विश्वकप फुटबल अन्तर्गत जुन १६ मा भएको खेलमा आयोजक राष्ट्रलाई उरुग्वेले नराम्ररी झड्का दियो भने स्पेनले पनि सपनामा पनि नसोचेको कुरा विपनामा भोग्नुपर्‍यो । विश्वकपको प्रबल दाबेदार राष्ट्र स्पेनले स्वीट्जरल्याण्डको गोल खानुपर्‍यो। त्यस्तै अपेक्षा गरे अनुसार नै होण्डुसरलाई चिलीले हरायो।
अपेक्षा अनुसार नै चिलीको जित
बुधबार भएको पहिलो खेलमा अपेक्षा गरिएअनुसार चिलीले होण्डुरसलाई एक गोलले हरायो । चिलीले ४८ वर्षपछि विश्वकपमा जीत हासिल गरेको हो ।
सन् १९६२ देखियता जिलीले कुनै प्रतिस्पर्धामा जित हासिल गरेको थिएन । तर यस पटकको विश्वकपमा मार्चेलो बिसनाको टीम निकै तयारीका साथ आएको थियो । यो पनि सम्भावना देखिदैछ कि ग्रुप एचबाट स्पेनका साथै चिली क्वालिफाइड हुनसक्छ।
चिलीले विश्वकपमा आफ्नो अभियान शुरुवातबाटै जितका साथ सुरु गरेको छ। उसले दोस्रो चरण प्रवेशको दावी बलियो ढं्रगले गरेको छ। चिलीका खेलाडीहरुले स-साना पासको सहयोगमा राम्रो प्रदर्शन गरे तर सफलता ३४औं मिनेटमा मात्र प्राप्त भयो । जा बोसेजुरले गोल एरियामा आएर राम्रो गोल गरे ।
स्पेनलाई पहिलो गाँसमै ढुङ्गा
यसअघि विश्वकपको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उलटपुलट गर्दै स्वीट्जरल्याण्डले स्पेनलाई हरायो । एक युरोपियन च्याम्पियन र संसारको नम्बर दुई टीम, टीममा कयौ स्टार खेलाडी । अगाडि स्वीटजरल्याण्डको टीम, जुन फीफा र्‍याङ्किङ्गमा २४औं स्थानमा छ, जुन टीम युरो कपको पहिलो चरणबाट बाहिर भइसकेको थियो तर परिणाम के भयो ? स्पेन हार्‍यो ।
खेलमाथि नियन्त्रण स्पेनकै थियो । तर उसका स्टार खेलाडीहरुले स्कोर गर्न सकेनन् । ५२औं मिनेटमा स्पेनका डिफेन्सलाई लज्जास्पद स्थितिमा पुर्‍याउँदै स्वीट्जरल्याण्डका गेल्सन फर्नाडिजले लामो पासमा गोल गरे ।
स्पेनको प्रतिष्ठित क्लव वार्सिलोनासँग खेल्ने जावी, इनिएष्टा र डेव विलाले स्वीट्जरल्याण्डले प्रहार गरेको गोलको उत्तर पत्ता लगाउन सकेनन् । हतास टीम कोचले टोरेस, नेवास र पेड्रोलाई फ्रन्टमा खेल्न पठाए । तर केही परिणाम आउन सकेन । यतिकैमा स्वीट्जरल्याण्डलाई थप गर्ने गर्ने एउटा मौका प्राप्त भयो, तर गोलपोष्टमा ठोक्किएर बाहिर भयो ।
प्रतियोगिताको अन्तिम समयमा स्पेनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगायो तर गोल गर्न सकेन । स्पेनका लागि अब बाटो निकै कठिन छ किनभने यदि टीम दोस्रो स्थानमै सीमित रह्यो भने दोस्रो चरणमै उसको प्रतिस्पर्धा ब्राजिलसँग हुन सक्दछ। दक्षिण अफ्रीकालाई दियो उरुग्वेले झड्का
के आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रीका १९औं विश्वकपको यात्राबाट चाँडै नै बाहिर हुँदैछ ? यही प्रश्नसहित निराशासहित दक्षिण अफ्रीकी फुटबल फ्यान प्रीटोरियाको मोजेज मविदा स्टेडियमबाट बाहिर निस्के ।
उरुग्वेविरुद्धको प्रतिस्पर्धामा दक्षिण अफ्रीकी टीमको दुर्गति नै बन्यो । यो हारपछि विश्वकपको दोस्रो चरणमा जाने दक्षिण अफ्रीकी सपना भत्केको छ। दक्षिण अफ्रीकाको टीम चाहँदैन कि दक्षिण अफ्रीका यस्तो आयोजक राष्ट्रय हो जो दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न सक्दैन ।
प्रतियोगितामा उरुग्वेका स्टार स्ट्राइकर डेविड फोरलैन छाइरहे । उनका साथ स्वरेज र कवानीले एकपछि अर्को आक्रमण गरे तर २४औं मिनेटमा जुन शानदार सनमा फोरलैनले पहिलो गोल गरे त्यो दर्शनीय थियो । । फोरलैनको शानदार गोलको सहयोगमा उरुग्वेले अग्रता लियो तर आक्रामक खेल छोडेन । उसका तीनै स्टार स्ट्राइकर दक्षिण अफ्रीकी गोलपोष्टमा हमला गरिनै रहे । दोस्रोतर्फ दक्षिण अफ्रीकी खेलाडीले राम्रो प्रदर्शन गरे तर उनीहरु उरुग्वेको प्रतिरक्षामै सीमित रहे । परिणाम खेलाडी दबावमा आएर अन्ततः त्यही भयो जुन कुनै पनि खेलाडीका लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण हुने गर्दछ-गोलकिपर खुनेले रेडकार्ड पाए र उरुग्वेले पेनाल्टी ।
एक पटक पुनः डेविड फोरलैनले पेनाल्टीमा गोल गरेर आफ्नो टीमलाई २-० ले अघि बढाएक थिए । दक्षिण अफ्रीकाको हालत त्यतिबेला निरिह बन्यो जतिबेला अेलको अन्तिम क्षणमा परेराले एक थप गोल गरे र आफ्नो टीमलाई ३-०ले जित दिलाए । अब दक्षिण अफ्रीकाको अन्तिम समूह प्रतिस्पर्धा फ्रान्ससँग हुनेछ। साथै फ्रान्स र म्याक्सिकोबीच हुने प्रतिस्पर्धाले पनि आगामी समीकरण निर्भर हुनेछ। mr.deepakbasnet@ymail.com/16 June
Filed under: SPORTS Tagged: | विश्वकप फुटबल world cup	« ब्राजिलले चाख्यो कोरियाको लज्जास्पद गोल/ रोनाल्डोलाई पहेलो कार्ड/स्लोभाकियालाई धक्का अर्जेन्टिनाले रच्यो इतिहास, गोन्जालोको ह्याट्रीक/हारको स्वाद चाखेको ग्रीस विजयी/ फ्रान्सलाई झट्का »